Urur Siyaasadeedka HorCad oo Taageeradiisa ku soo bandhigay Bosaso+Sawiro – SBC
Urur Siyaasadeedka HorCad oo Taageeradiisa ku soo bandhigay Bosaso+Sawiro
Posted by Webmaster on July 4, 2013 Comments
Iyadoo lagu guda jiro Waqtiyadii Ololaha Dorashooyinka Golaha deegaanka Ee Puntland ayaa waxaa Maanta Magaalada Boosaso ku soo bandhigay cududiisa taageero Urursiyaasadeedka Hor Cad oo ka mid ah Ururada loolanka dheer ugu jira sidii uu ugu soo bixilaha Doorashada Golaha Deegaanka.
Kumaanaan qof oo ah taageerayaashaa ururka siyaasadedka Hor cad ayaa gawaari ku soo maray Wadooyinka Waaweyn Eee Magaalada Boosaaso Iyagoona watay Boorar ay ku qoranyihiin Halgu dhigyo iyo ereyo ay ku tageerayaan ururkaan gudanbayna waxa ay ku soo biya shubteen garoonka weyn ee Kubada Cagta Magaalada Boosaaso.
Halkaas waxaa Taageerayaasha kala hadlay Msuuliyiinta ugu sareysa ururkaas iyo weliba Xilibaano u taagan Golaha Degaanka Ee Degmada Boosaaso.
Iyagoona ugu baaqay taageerayaashooda in Maalinta Codaynta ay u Codeeyaan Urursiyaasadeedka Hor cad , waxa ayna halkaas tageerayaasha ururku ku soo bandhigeen sugaan iyo weliba cayaaro hidaha iyo dhaqanka ah ay ku tagerayaan ururkaan.
Afhayeenka Urur siyaasadeedka Hormarka iyo Cadaalada ee Hor cad Axmed yaasiin Saalax ayaa Taageerayaasha la hadlay isagoona sheegay in ururkaan uu yahay urur ka turjumayaa wax qabad iyo weliba isbedel wanaagsan loona baahanyahay in aad tageeertaan liga Doorashooyinka .
Yaasmin oo ka mid ah Xildhibaanada u sharaxan Golaha deegaanka Degmada Booosaaso ayaa Tegeerayaasha ururka ka codsatay in la sii codkoda Maalinta Codbixinta .
C.casiis Mahdi oo ka mid ah Madaxda Urur siyaasadeedka ayaa dhankiisa tageerayaasha Ururkaan ugu hanbalyeyey sida wanaagsan oo ay isugu soo baxeen kuna booriyey sida ay hada u soo baxeen in ay xiliga Codayntana u codeyaan Ururka ka turjumayaa Hormarka iyo sinaanta Bulshada reer Puntland .
Isku soo wada Dooboo Ururka Hormarka iyo Cadaalada Ee marka Magiciisa la soo gaabiyo loo yaqaan Hor Cad ayaa Noqonaaya Ururkii Ugu taageerada Badanaa inta ay socotay ololaha taageerada Xisbiyada Badan Ee Puntland .
Ibraahim Maxamuud Yuusuf